बागेश्वरीको दर्शन गरौं, हात्ती चढेर बाघ हेरौ – sunpani.com
बागेश्वरीको दर्शन गरौं, हात्ती चढेर बाघ हेरौ
नेपालगञ्ज – नेपाल भ्रमण वर्षको शुरुवात भइसकेको छ । विभिन्न गन्तब्य स्थानहरुको खोजी भइरहेका छन् । भ्रमण वर्ष भएकाले घुम्ने र घुमाउनेको कै चर्चा–परिचर्चा रहेको छ ।
बाँके पनि यसमा अछुतो छैन । कम्तीमा पनि यहाँका दुई वटा पर्यटकीय स्थल चर्चाको शिखरमा छन्, एउटा बागेश्वरी मन्दिर र अर्को बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज । सतिको जिब्रो पतन भएको ठाउँ भएकाले बागेश्वरी (वाक्येश्वरी) महत्वपूर्ण धार्मिकस्थल मानिन्छ, आस्थाको धरोहर । बागेश्वरी सदाबहार धार्मिक पर्यटकीय स्थल हो । नेपालगञ्ज आइपुग्ने पर्यटकहरु बागेश्वरी मन्दिरमा नपुगेको कमै हुन्छ । एकपटक माताको दर्शन गर्न पुग्छन् । बागेश्वरीमा पूजा गर्नकै लागि टाढा–टाढाबाट भक्तालु आउने गर्दछन् ।
बागेश्वरीको महिमा देशभित्रमात्रै होइन, भारतमा पनि उत्तिकै छ । हिन्दु धर्ममा विश्वास गर्नेका लागि बागेश्वरी पुग्नै पर्ने ठाउँ हो । भारत उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथकहाँ पुग्ने पश्चिम नेपालका व्यक्तिहरुसँग उनले एकपटक बागेश्वरीको चर्चा गर्ने गरेको पाइन्छ । योगी आदित्यनाथ बागेश्वरीको दर्शन गर्न आइरहने व्यक्तित्वमा पर्दछन् । पछिल्लो पटक उद्योगी व्यापारीको लखनऊ भ्रमणमा उनले बागेश्वरी मन्दिरको चर्चा गरेका थिए ।
बाँकेको अर्को गन्तब्यस्थल बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज नै हो । २०६७ सालमा स्थापना गरिएको यो निकुञ्ज बाघका लागि उपयुक्त मानिन्छ । बाघ पर्यटकले हेर्न खोज्ने जनावरमा एक नम्बरमा पर्ने गर्दछ । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा यतिबेला २१ वटा बाघ छन् । यो निकुञ्जमा विश्वमा दुर्लभ मानिने चौका नै दुई सय बढी छन् । तीन सयबढी प्रजातीका चराहरु छन् । बाघका आहारा प्रजाती मानिने बँदेले, मृग र जरायो छ्याप्छ्याप्ती छन् ।
निकुञ्जले हात्ती र जीप सफारी शुरु गरिसकेको छ । गाभरदेखि अगैयासम्मको ६५ किलोमिटरको रुट तयार पारिएको छ । यो रुट पार गर्न साढे तीन घण्टा लाग्छ । साढे तीन घण्टा सफारी गरेर विभिन्न जनावर र चराचुरंगी हेर्दा कसको मन नलोभिएला र ? सेल्फीको जमानामा यसरी सफारी गर्नेको मोबाइलमा कति फोटो अपलोड होलान् ?
बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा चार वटा हात्ती छन् । निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत प्रमोद भट्टराईका अनुसार, थप दुई वटा हात्ती ल्याउने लेखापढी भइसकेको छ । हात्ती चढ्न नेपालीले सय रुपैयाको प्रवेश शुल्क तिरेपछि पाँच सय दिए हुन्छ । ६ सय रुपैया खर्च गरेपछि दुई घण्टा हात्तीमा बसेर जंगल सफारी गर्न पाइन्छ । हात्तीमाथि बसेर बाघ प्रत्यक्ष देख्दा कसको मन आनन्दित नहोला र ? यस्तो मौका नगुमाऔं ।
भ्रमण वर्षको शुरुवातमै ५ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा हात्ती सफारी गर्नुभयो । यसले निकुञ्जको प्रचारप्रसारमा टेवा पुगेको छ । नेपालगञ्ज होटल व्यवसायीले बागेश्वरी र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जोडेर पर्यटक तान्ने रणनीति बनाएका छन् । बागेश्वरीको दर्शन गरेर निकुञ्ज पुग्ने पर्यटक एक वा दुई दिन त यहाँ बस्ने पर्छ । बास बस्ने पर्यटक आउदा होटल व्यवसायीलाई फाइदै हुन्छ । त्यसै पनि जिल्ला पर्यटक प्रवद्र्धन समितिले भारतीय पर्यटकलाई आकर्षित गर्न यी दुई ठाउँको प्रचार प्रसारलाई व्यापक बनाउदैछ । भारतीय शहरहरुमा यी दुई ठाउँको भ्रमणको लागि निम्तो दिन जाने कार्यक्रम बनाइएको छ ।
बाँके आइपुग्ने पर्यटकलाई यी दुई ठाउँमात्रै होइन, आसपासका पर्यटकीय स्थलहरुको भ्रमण गराउन सकिन्छ । खासगरी विहान बागेश्वरीको दर्शन गर्ने र दिउँसो हात्ती चढेर निकुञ्जमा बाघ हेर्ने मेसो मिलाउन सकियो भने पर्यटकलाई खोज्न जानु पर्दैन । आफै आउँछन् । खोज्दै आउँछन् ।